Mari yepanjodzi inokanganisa sei misika yemasheya? | Ehupfumi Zvemari
Mari yepanjodzi inokanganisa sei misika yemasheya?
Iyo pangozi premium ndeimwe yemipimo yakakosha yekuona kushanduka kwemisika yemasheya. Hazvishamisi kuti vatengesi vanozvitarisa mazuva ese kuti vaone sarudzo dzavachaita kuti kuchengetedza kwavo kubatsire. Nekudaro, zvinotanga zvakafanira kuziva kuti izwi rinokosha rezvehupfumi iri rinorevei. Zvakanaka, iyo njodzi yekutanga njodzi kune iyo iyo iyo mutsauko pakati pekufarira iyo inokumbirwa kune chikwereti chakapihwa nenyika iyo zvinhu zvayo zvine njodzi huru zvichienzaniswa neimwe isina njodzi.
Chero zvazvingaitika, uye kuti unzwisise zvirinyore zvazvinoreva, unofanirwa kuziva kuti mhando iyi yeprimiyamu inozivikanwa zviri nani pakati pechikamu chakanaka chevashambadziri senge njodzi kubva munyika. Nekuti zvirizvo, hapana zvishoma uye hapana chimwe kunze kwekuyera njodzi idzo rudzi dzinogona kupfuura napo, chero zvingave zviri. Uye zvave zvichizivikanwa kwazvo nezviitiko izvo yakagadziriswa munguva yekunetsekana kweupfumi, uko zuva rega rega chinhu chekutanga chinhu chakaitwa nevamiriri vese vezvemari kwaive kuongorora kuti yaive premium ngozi muSpain. Nekuti padanho rakakura, uye zvinoenderana nekushanduka kwayo, musika wemasheya wakadonha kana kusimuka neakawanda kana mashoma kusimba.
Imwe yemakiyi eprimiyamu yengozi ndeyekuti kuverenga kwayo kunoitwa sei, nekuti dzimwe nguva inogadzira dambudziko risinganzwisisike kusvika muzana reiyi data rakakosha rehupfumi. Huye, iyo yekuSpanish ngozi panjodzi, senge yeiyo chero imwe nyika munharaunda medu, yakaverengerwa nekubvisa mubereko wakabhadharwa pamabond-gore gumi ChiSpanish chimbadzo chakabhadharwa pazvisungo zveGerman mune hwaro hwenongedzo. Nekuti zvirizvo, chisungo ichi cheGerman ndiyo poindi yekunongedzera kuti ndeipi danho rayo nguva dzose. Iine musiyano wakasiyana, zvinoenderana nekushanduka kwayo.
1 Batanidza kune chikwereti cheGerman
2 Risk premium: ayo mwero
3 Mhedzisiro yeiyo yepamusoro njodzi ngozi
4 Zvikwereti zvishoma uye zvinodhura
5 Mari inotsvaga mimwe misika
Batanidza kune chikwereti cheGerman
Kuona iyo premium njodzi, zvakakosha kuti uzive kuti kwete chete izvo kushaya simba kweSpanish chikwereti kuverenga, asiwo simba rechikwereti cheGerman. Mukuita uku, pane mari yakawanda inopfuura kubva paruoko uye vakundi vazhinji nevanokundwa. Ndiyo imwe yenyaya dzichaburitsa muchinyorwa chino. Nekuti inogona kukubatsira iwe kutora chinzvimbo mune imwe kana imwe mari yemari. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana yakawanda mari, asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana, uchisiya yakanyanyisa maeuro munzira. Uyu mutero unofanirwa kubhadharwa kune iyo ngozi yekutanga nyika, mune ino Spain.
Mukati meichi chiitiko chakajairika, iyo premium njodzi yakanyorwa pamisika yemari sekunge yaive mari yemari kubvira pakupera kwezuva iri. Nekungogara uchisiyana zuva rega rega uye kuti mukupedzisira sarudza kubatsirwa kwemari. Mupfungwa iyi, inomiririra bhenefiti yakakura kumushambadzi mukutsinhana nekutora njodzi huru. Sezvauchaona, izwi rekuti njodzi rinogara riripo muzviito zvavo zvese, sekune rimwe divi zvine musoro kuti unzwisise. Uye neimwe nzira, yakaiswa muduramazwi rechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Mune imwe nzira kana imwe, sezvazviri zvakasikwa uye neimwe nzira zvinonzwisisika.
Risk premium: ayo mwero
Panguva ino zvichave zvakafanira zvakakwana kuti uzive kuti nei mari yepanjodzi iri pane imwe nhanho kana imwe. Zvakanaka, kana zvichinzi iyo mari yekudyara muSpain iri pamatanho e100 base point, zvinoreva kuti hapana njodzi kune hupfumi hwenyika. Mune mamwe mazwi, inyaya yakanaka mamiriro ezvinhu ehupfumi. Iine yakajeka mhedzisiro pamisika yequity nekufarira stock exchange chengeta uptrend semhedzisiro yeiyi kuongororwa. Iko kutenga kunoiswa nekujekesa kukuru pakutengesa. Ichokwadi kuti nhau dzinogamuchirwa kwazvo nevamiriri vese vehupfumi uye varimari havaigona kunge vasipo pakati pavo.
Pane zvinopesana, kana iyo premium yengozi isina kudzorwa, senge pamusoro pe400 hwaro hwenongedzo, ine chirevo chakapesana zvachose. Icho chaicho chiri mhedzisiro yeidi yekuti njodzi dzakanyanya kwazvo uye kuedza kukuru kunofanirwa kuitwa kuti kuchinje maitiro aya kana kutenderera kwehupfumi. Sezvo zvinogona kunzwisiswa, misika yezvemari haitore chokwadi ichi chaizvo uye pane zvakajairika inodonha mumasaga, kunyangwe iine kusimba chaiko. Zvimwe kana zvishoma icho chiratidzo cheizvo zvakaitika muSpain pakutanga kwedambudziko rehupfumi, kutenderedza 2012 na2013, apo mari yayo yenjodzi yakasvika pamatanho anotyisa zvechokwadi.
Mhedzisiro yeiyo yepamusoro njodzi ngozi
Ino inguva yekuongorora mhedzisiro yayo pahupfumi hwenyika uye kunyanya kana iri chikamu chemupiro chakanyanya kwazvo. Nekuti zvazvinoreva zvine chekuita nezvaungatenda kubva pakutanga. Zvakananga kukanganisa homwe yevatengi ivo pachavo. Asi yave nguva yekuti uone kuti ndezvipi zvakakosha mhedzisiro uye kuti ungazviona sei kubva zvino zvichienda mberi.
Kukwira kwakanyanya kweprimiyamu yenjodzi pamusoro penyika yedu kunoratidzwa zvakare muchokwadi chaicho chemakambani. Hazvishamisi kuti zvinoreva kuti yakakwira mutengo wemari yako. Kusvika padanho rekuti inogona kukonzera kushaikwa kwemabasa kuwedzera nekusagona kutora chikamu chikuru cheichigadzirwa.
Imwe yemhedzisiro yakatwasuka yechiitiko ichi ndeyekuti zvido zvinokura zvakanyanya uye semhedzisiro yetsika iyi nyika ichafanirwa chengetera yakawanda mari kuti ukwanise kuvabhadhara. Izvi mukuita zvinoreva kuti pachave nemari shoma yekushandisa munharaunda, zvivakwa, tekinoroji uye mamwe marudzi ebasa uye mabhenefiti. Haisi mamiriro akanakisa, nekudaro, kune ruzhinji rwevagari sezvo nyika ichizopa mutemo wezvehupfumi wakanangana nekuchengetedza.
Ehe, kukwira kweprimiyamu yengozi haisi nhau dzakanaka dzebasa, kure nazvo. Nekuti zvirizvo, zvinoenderana nekuverenga kwakaitwa nebhengi chikamu, zvinoratidzwa kuti kwese zana hwaro hunoratidza kuti mari yengozi inokwira, angangoita 100 mabasa anogadzirwa kuSpain. Naizvozvo, nekuratidzira hukama hwakajeka pakati peyakanyanya njodzi premium uye iyo chizvarwa chebasa munyika. Sezvazvakaitika kuSpain mumakore achangopfuura, uko iyi paramende yehupfumi yakabva pa500 kuenda pasi pezana zana hwaro mumakore mashoma, sezviri kuitika izvozvi.
Zvikwereti zvishoma uye zvinodhura
Kana isu hatikwanise kukanganwa chimwe chokwadi chine chiratidzo chakakosha munharaunda uye chinotorwa kubva pakuda kuzvipa mari munzira dzekushambadzira, nepfungwa iyi, mabhangi anofanira kubhadhara mari yakawanda kuti uwane mari uye chokwadi ichi chinobva chapfuudzwa kumushandisi. Ichokwadi ichi chinoreva kuti kupihwa kwemakiredhi echikwereti kuri kudzikira uye kuti mamiriro ezvinhu anyanya kushata kupfuura zvino. Ndokunge, mutengi haazove nesarudzo kunze kwekubhadhara mari yepamusoro kuti akwanise kuzvipa mari. Ndokureva, zvikamu zviviri zvemaitiro izvi zvichabatika zvakajeka neiyi maitiro muprimiyamu yenjodzi.
Kune rimwe divi, chokwadi chekuti kunwa kuri kudzikira pasi nehukuru hwakanyanya zvakare kwakakosha. Iko kune mari shoma inofamba uye semhedzisiro yavo iwo makuru ehupfumi mamiriro enyika anokuvadzwa. Kusvika kumatanho anogona kuve nenjodzi kune wese munhu. Sezvinei, kudzikira kwehupfumi uye kushaikwa kwemabasa sezvimwe zvezvinhu zvakakosha zvikuru uye zvinoonekwa nechikamu chakanaka chevamiriri venzanga. Iyo yakaipa kwazvo mweya iyo isina kana poindi dzakanaka, sezvatiri kuratidza muchinyorwa chino.
Mari inotsvaga mimwe misika
Uye hazvigone kukanganwika kuti kana izvi zviitiko zvikagadzirwa, mari inochinja maoko. Izvi zvinoreva kuti kuyerera kwekudyara kunoedza kutsvaga mimwe misika yezvemari inovapa chengetedzo huru nerunyararo. Kazhinji kuenda kumatunhu akatsiga, semuenzaniso wechiGerman kana North America. Icho chiratidzo chekuti mari panguva ino haina nyika, asi panzvimbo pezvo inotsvaga pundutso yayo, pamusoro pezvimwe zvekufunga kwehunyanzvi. Uye zvechokwadi, mune izvi zviitiko haisi iyo yakanaka purofiti yavanogona kuwana.
Ichi ndicho chimwe chinokurudzira vatengesi vakuru kuti vaendese mari yavo kune imwe misika yemari. Nemutengo wekutengesa pamutengo wemasheya sezvo kushomeka kwevatengi kunokanganisa maitiro akasarudzika kuti aite uye ayo anoonekwa nevashambadzi vadiki nepakati. Nekuti hapana mubvunzo kuti kutenga kunogona kuitwa nemitengo yakagadziridzwa kune chaichoicho chokwadi. Kunze kwemisangano inogona kuitika mumisika yezvemari yenyika, pasi peimwe simba kana imwe. Hazvishamisi kuti ndeimwe njodzi yakawedzerwa iyo varimi vane.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mari yepanjodzi inokanganisa sei misika yemasheya?
Iyo yekudiridza premium inokanganisa sei kudyara?
Ndeupi mutero weTobin?